Kuongorora kweFirefox, bheji nyowani yeMozilla yeApple | Linux Vakapindwa muropa
Nekusvika kweFirefox Quantum, Mozilla zvakare yakazivisa kuuya kweiyo nyowani Firefox kunyorera kweApple mafoni.. Mozilla inopa chiitiko chitsva-chakapfuma chinosanganisa chengetedzo, kuvanzika, uye rusununguko. Zvinoenderana nenheyo, iyo app ichiri pasi pekuvandudzwa, asi yakagadzikana vhezheni inofanirwa kuburitswa kudonha uku.
Mozilla Kutanga kuyedza kudzikisa chikamu cheGoogle Chrome pamusika kuvhura Firefox Quantum (Firefox 57) muna 2017. Bhurawuza racho rakabvumidza Mozilla kuzvimisikidza semukwikwidzi mukuru weGoogle mumusika webrowser pane ese marudzi emapuratifomu.
Eya, yakanga yakavhurwa neinjini nyowani yekupa, yakagadzirirwa kutora mukana wakazara wesimba rekugadzirisa mune zvishandiso zvazvino. Pamusoro pechikamu chekuita, iyo interface yemushandisi yakavakwazve muFirefox Quantum nekuda kweprojekiti yePhoton.
Iyo Quantum yeFirefox mushandisi interface yakajeka uye yakawanda yazvino, iine zvinowirirana zvinoonekwa uye optimizations yea touchscreens.
Nekugadzira Firefox Focus, yeIOS uye Android, kambani yakanga yatobvisa vateveri vevashandisi. Kuti uenderere mberi panguva ino kutenderera, kambani yakasarudza kugadzira bhurawuza iyo inogara ichitarisa zvakavanzika, asi ikozvino inowedzera chengetedzo uye kuvanzika kune ayo ekutanga.
Iyo Mozilla Foundation yakadzorerazve dandemutande rayo rewebhu kumamirioni mabhiriyoni maviri nemazana mashanu anomhanyisa sisitimu yeGoogle.
“Sezvo isu tairamba tichivandudza Firefox Focus nekufamba kwenguva, takaona kuti vashandisi vaikumbira ruzivo rwakakwana rwekubhurawuza nhare, asi zvakavanzika uye zvakachengeteka kupfuura chero chishandiso chiripo.
Saka tafunga kuita kuti Firefox iwedzere kufanana neFocus, nekureruka kwese uye nyore yebrowser yakazara, "akadaro Mozilla.
Nezve Firefox Preview
Mhedzisiro yacho yekutanga vhezheni yechishandiso chitsva chinonzi Firefox Preview. Iyo yekupedzisira inoita kunge inonyorwazve yeFirefox Focus uye yakavakirwa paiyo GeckoView injini, ine zvimwe zvitsva. Kuonekwa kweFirefox kuchiri mubeta, asi prototype yakagadzirira kuyedzwa.
“NeFirefox Preview, tinobatanidza zvakanakisa pane izvo yedu isingaremi Focus app uye edu zvazvino mabhurawuza efoni anogona kupa kuti tigadzire isingaenzaniswi nharembozha. Chishandiso chitsva ichi chinofambiswa neinjiniya yeFirefox nhare, GeckoView, iyo inosanganisira iyo yepamusoro-inoshanda injini iyo inosimbisa yedu Focus application, "akadaro Mozilla.
Mazhinji emamwe makuru mabhurawuza eApple ikozvino akavakirwa paBlink uye nekudaro zvinoratidza zvisarudzo zveGoogle zvekufambisa, asi Mozilla haina chinangwa chekuenda nenzira iyoyo.
"Injini yeGeckoView muFirefox inotipa isu nevashandisi vedu rusununguko," yakadaro nheyo. Iyo GeckoView kuitisa inogadzirira nzira yekushandurwa kwakazara kweiyo Firefox nharembozha ruzivo.
Izvi zvinobvumira iyo bhurawuza nyowani kuti ipe hukuru hwakanyanya maererano neyakavanzika uye chengetedzo yevanoshandisa nhare.
Sekureva kweMozilla, GeckoView inogonesa inokurumidza, yakachengeteka, uye nyore kushandisa mabhurawuza ane zvisati zvamboitika. Aya ndiwo mamwe eFirefox Preview Firefox maficha akaziviswa neMozilla:
Kurumidza kupfuura nakare kose: Kutarisa kweFirefox kukwira kusvika kumhanya zvakapetwa zvakapfuura shanduro dzeFirefox yeApple;
Kurumidza Kugadzira: ine skrini shoma yemusha uye yepasi yekufambisa bar. Kufanoona kunoita kuti iwe uite zvimwe paunenge uchienda;
Ramba wakarongeka: Ziva iwe webhu ne "Unganidzo," chinhu chitsva chinokubatsira iwe kuchengetedza, kuronga, uye kugovana saiti kuunganidzwa. Kurumidza kurekodha uye tangazve mabasa senge ako mangwanani maitiro, ezvitoro zvinyorwa, rwendo rwendo, uye nezvimwe. ;
Kuchengetedza kwekuchengetedza kunogoneswa nekutadza: Mozilla inoda kuchengetedza vashandisi vayo kubva kune vanoparadza vashambadzi trackers uye nevamwe vatambi vane ngozi. Firefox Preview inodzivirira default trackers. Mhedzisiro yacho ndeye kukurumidza kubhurawuza uye kushoma kunetseka.
Muchidimbu, Firefox Preview ndeye yakasarudzika nhare mbozha yakanangwa zvakanyanya kune vanogadzira nevashandisi vanoda kubatsira kuvandudza Firefox paApple. Chiitiko chemushandisi chekuburitswa kwekutanga ichi chichava chakasiyana kwazvo nechigadzirwa chekupedzisira, icho chinoburitswa gore rino, akadaro Mozilla.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Kuongorora kweFirefox, bheji nyowani yeMozilla yeApple
Vagadziri veGoogle vanoda kugadzira yavo libc yeLLVM